🥇 ▷ redmi Note 8: fiidiyowga rasmiga ah ee fiaser wuxuu cadeeyaa 64MP ✅
Ku dhawaad ​​dhammaan daadadku redmi note 8 (waa Ogeysiiska 8 Pro) ayaa lagu xaqiijiyay mid fiidiyow fiidiyow rasmi ah waxaa daabacay Weibo oo ay qortay RedMi. Muuqaalka ayaa waliba suuragal ka dhigaya in laga fiirsado qaabeynta, oo si aad ah u liqday maalmihii ugu dambeeyay.
redmi Note 8, faahfaahinta rasmiga ah
Ahaansha xayeesiinta xayeysiinta, clipku waa inuu ahaadaa mid ku saleysan macno ahaan – iyo wax walba – waa la tarjumay, iyadoo la tixgelinayo inay kujirto Shiinaha. Waxaa jira koox dhagax weyn leh, oo leh durbaan qurux badan oo, inta ciyaaraya, oo xaqiijinaya faahfaahinta aaladda qaarkood, iyada oo gacan laga helayo qoraallo dheeri ah.
Warka ugu xiisaha badan runti wuxuu khuseeyaa qaybta sawirka ee Daabacaadda Pro: kamaradda ugu weyn waxay noqon doontaa qalabka cusub ee Samsung ka 64MP. Xaqiiqdii, moodalka caadiga ah kaameeraha aasaasiga ah wuxuu noqon doonaa 48MP (runti waa hubaal Samsung ISOCELL Bright GM2 model).
Fiidiyowgu wuxuu kaloo xaqiijinayaa taariikhda la bilaabayo taas oo aan fileynay: imaatinka RedMi tirada Note 8 8 ayaa loo qorsheeyay 29-ka Ogosto, oo ay weheliso TV-ga RedMi ee ugu horreeya. Intaa waxaa sii dheer, adoo si dhow u fiirinaya shaashadda waxaa sidoo kale suuragal ah in la helo faahfaahinta naqshadda. Dhanka kale, shalay waxaa jiray xaqiijin kale oo rasmi ah oo ku saabsan processor, markan laga bilaabo Mediatek: aaladda waxaa jiri doona astaamo cusub oo loo yaqaan ‘Helio G90T’, tirada udub dhexaadka ah sidoo kale way ka liidi doontaa ciyaaraha, ka dib.